Naylon Cast waa mid ka mid ah balaastikada injineernimada ee sida aadka ah loo isticmaalo, gaar ahaan dhanka farsamada sida aaladda u adkeysata xirashada iyo yareynta dharka si loo badalo biraha aan diiranayn sida naxaasta iyo aaladaha. 400-kiilo garaam oo soo saaray naylon ...
Shirkaddayadu waxaa la aasaasay 1974, waa shirkaddii ugu horreysay ee nylon ee Shiinaha. Shirkaddu waxay ku taal Huai'an, Gobolka Jiangsu, oo ah magaaladii Premier Zhou Enlai oo leh muuqaal qurux badan. Waxaa la aasaasay 1974, oo ku takhasusay soosaarka ...
MC nylon rod, oo sidoo kale loo yaqaan "cast nylon rod", waa nooc walxo ceeriin ah oo la dhalaalay, c6h11no, oo ah walxo ceeriin ah oo la dhalaalay, kaas oo u adeegsada waxyaabaha aasaasiga u ah kal-kiciyaha. MC nylon rod iyo activator iyo waxyaabo kale oo lagu daro waxaa loo sameeyaa monomer si ay u noqdaan po ...